Umbhobho wentsimbi ocimayo kunye nokucoca ubushushu kunyango kuqhutywa bubushushu
Umbhobho wentsimbi ophelisa ubushushu kunye nokunyanga ubushushu kunyanzeliswa ukuba kwenziwe ngokufudumeza ubushushu okanye ukufudumeza ilangatye. Iiparameter eziphambili zobuchwephesha bubulukhuni bomphezulu, ubulukhuni bendawo kunye nobunzulu bokuqina kobungqimba. Ukuvavanywa kobulukhuni kunokusebenzisa iVickers yokuqina kobunzima, kunokusebenzisa iRockwell ...
Nge-30 ka-Epreli, i-2018, emva kweenyanga ezininzi zokulungisa ingxaki, inkampani esanda kuthengwa engu-3 yocingo lwe-mechine yafakwa ngempumelelo, kwaye umongameli wenkampani ezinye iinkokheli zathatha inxaxheba kwimveliso yesiqwenga sokuqala socingo. Izixhobo zingasetyenziselwa umgangatho ophezulu ...
Umthengi ovela e-Australia, eSingapore, eThailand weza kumzi-mveliso wethu esenza uphando lweentsuku ezimbini kunye notyelelo. Bajolise kwintambo yentsimbi engenacici ye-1x61mm, ∮42mm, Ngexesha lophando, abathengi batyelele indawo yemveliso kwaye babukela inkqubo yokuvelisa ...